दीपिकाले लन्डनमा किनेको घरमा किन साझेदार छैनन् रणवीर ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कोरोनाको माहामारीः चीनबाट हामीले के सिक्ने ?
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
चीनमा लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितको खोजी शुरु
भरतपुर अस्पताल बिकास समितिको अध्यक्षमा डा. भोजराज अधिकारी मनाेनित
अलपत्र मजदुरलाई नआत्तिन नेकपा नेता आचार्यको सुझाव
दीपिकाले लन्डनमा किनेको घरमा किन साझेदार छैनन् रणवीर ?
दीपिका पादुकोण को फिल्म पद्मावत आफ्नो रिलीजलाई लिएर संकटमा भएतापनि दीपिका भने आफ्नो पर्सनल लाइफमा पूरा केन्द्रीत भएर लागेकी छिन् । दीपिकाले गोवा पछि अहिले लन्डनमा घर किनेको खवर मिडियामा आइरहेको छ ।
श्रोतलाई उल्लेख गर्दै डेककन क्रानिकलले आफ्नो रिपोर्ट भनेका छन् कि, ‘दीपिका ले लन्डनको पोश इलाकामा एउटा घर लिएकी छिन् । पद्मवती को रिलीज पछि उनि लन्डनमा रहेको आफ्नो नयाँ घरमा समय विताउँन चाहन्छिन् । त्यसपछि मात्रै उनी आफ्नो अर्को प्रोजेक्ट लाग्ने छिन् ।’ श्रोतका अनुसार दीपिका ले यो घर स्वतन्त्र रुपमा लिएकी हुन् ।
उनका प्रेमि रणवीर सिंहको यसमा कुनै शेयर छैन। दीपिका केहि समय देखि देश बाहिर आफ्नो प्राईभेट समय वितउँन चाहन्छिन् । हालै मा यो खबर पनि आएको छ कि दीपिका र रणवीर सिंह मिलेर गोवा मा एक आशीशान घर किनेका छन्। गोवा मा घर किनेसंगै फेरी दीपिका र रणवीर को यस वर्ष विवाह हुने चर्चा बढ्दै गएको छ ।
मुम्बई मिररको रिपोर्ट अनुसार गोवामा घर किनेपछि यो पनि खुलासा भएको छ कि जुन ठाउँमा रणवीर दीपिका को घर छ त्यहीँ पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर र पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को पनि घर रहेको छ । दीपिका र रणवीर को विवाह को चर्चा त्यो समय देखि भएको थियो जुन समयमा रणवीरले दीपिकालाई परफेक्ट म्यारिज मेटेरियल गर्ल भनेका थिए ।यस पछि विवाह को चर्चामा आगोमा घ्यू हाल्ने काम त्यो वेला गर्यो जुन वेला दीपिकाका बुवा प्रकाश पादुकोणले एक अन्तरवार्तामा भने, ‘दीपिका को आफ्नो विवाह को फैसला आफैलिन सक्छिन्, मेरो तर्फबाट उनी पूर्ण स्वतन्त्र छिन् ।’